श्री पशुपतिनाथको नित्य पुजा चलेकै छ तर भिड कम गर्न भक्तजनलाई रोक - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
श्री पशुपतिनाथको नित्य पुजा चलेकै छ तर भिड कम गर्न भक्तजनलाई रोक
लेखक : लेखापढी ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०४:५४ मा प्रकाशित
आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको नित्य पुजा रोकिएको छैन र दिनहुुँ भईरहेको छ मात्रै दर्शनार्थीले प्रमुख तथा मुख्य देवको दर्शन गर्न नपाएको मात्रै हुन्। कोरोनाको कहरको मध्यनजर गर्दै त्यहाँका मुल भट्ट, भट्ट, भण्डारी तथा अन्यको स्वास्थ ध्यानमा राखि तथा अन्य दर्शनार्थीको पनि स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी दर्शन गर्न व्यबस्था मिलाई दिए धेरै उत्तम हुने थियो भन्ने मात्रै हो। त्यहाँका व्यबस्थापन तथा अन्य व्यक्तित्वको कोरोनाले गर्दा आईसोलेसनमा बस्न बाध्यता उत्पन्न भई आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ दैनिकी नित्य पुजामा बाधा व्यबधान नहोस् यो नै महत्त्वपूर्ण तथा ख्याल राख्न पर्ने बिषय हो।
यदि स्वास्थ्यको कारणले तथा अन्य कारणले नित्य पुजा रोकिन गए राजनीतिक र धार्मिक हिसाबले ठुलो बिद्रोह ल्याउन सक्ने सम्भावना त छँदैछ। त्यस माथि मुल मन्दिरको नित्य पुजा रोकिए अनिष्ट हुने र परम्परा भङ्ग हुनेछ भन्ने वैदिक मान्यता पनि छ।
यदि स्वास्थ्यको कारणले तथा अन्य कारणले नित्य पुजा रोकिन गए राजनीतिक र धार्मिक हिसाबले ठुलो बिद्रोह ल्याउन सक्ने सम्भावना त छँदैछ। त्यस माथि मुल मन्दिरको नित्य पुजा रोकिए अनिष्ट हुने र परम्परा भङ्ग हुनेछ भन्ने वैदिक मान्यता पनि छ। परापुर्वकाल देखि चलि आएको प्रथा र परिचालन बिरूद्व भट्ट प्रकरणको पनि राजनीतिक दाउपेच भईरहेको अबस्था पनि छ। कुनै कारण निम्त्याई तथा त्यहाँ कुनै भवितब्य उत्पन्न गराई धार्मिक र साँस्कृतिक परम्परागत अनुरूप चलि आएको प्रचलनलाई बाधा तथा अड्चन हुने र धर्म संस्कृति माथि खेलवाड गर्ने कुचेष्टा नहोस्।
ठिक छ कसैले कोरोनालाई पश्चिमाका दाउपेच भन्छन्, कसैले राजनिती मौका ह‍ो भनी फाईदा उठाईरहेका छन्, कसैले मास्कले लाज छोपेका भन्छन्, कसैले फलानो ढिस्कानो सेवन गर्नु भन्छन्। यो साधारण जनताको सोच भन्दा बाहिरका कुरा हुन् झैं लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपिले आफ्नै घरेलु औषधीको रूपको बेसार पानी खाउ भन्ने सल्लाहलाई बिज्ञ भन्दा बढि जान्ने भनेर हामीले उहाँको खिसीटिउरी गर्दै उडाउने काम गर्यौं। त्यस्तै हो भने बिना पत्ताको मान्छेहरूबाट यस्तै तबरले जनतालाई दिग्भ्रमित हुने सरसल्लाह पनि आउन हुन्न। कसरी स्वास्थ्य बिज्ञानको कुरालाई ज्ञान प्राप्त बिज्ञ झैं विश्लेषण गर्दै मनपरि अर्थ लाग्ने तथा अर्थ न व्यर्थका टिप्पणीहरू गर्नुको औचित्य के हो?
जनतालाई सुझाव दिई कोरोना केही होइन भन्ने व्यक्तित्वहरूको सुझाव कुन आधारमा भईरहेको छ र के ती महान बिश्लेषकहरूले कोरोनाको संक्रमित व्यक्तिहरूको माझमा बसि निस्वार्थ सेवा गरेर वा आफै भुक्तभोगी भई पोख्त भई सुझाव व्यक्त गरिरहेका हुन् ? मानौ यदि बिदेशीले हौवा फैलाएका हुन् भने कसरी ती देशहरूमा नै व्याप्त रूपले यहि महामारीले संत्रास फैलिरहेको छ वा मृत्यु बरण गर्नु परिरहेको छ? यदि मृत्यु बहन गर्नु परेको व्यक्तिलाई कोरोना लागेर नभई अन्य रोगले वा कालगतिले मृत्यु भएको हो भन्ने ठोस प्रमाण के हुन सक्छ, यो जनताको प्रति प्रश्न छ। सरकारले त्यसै मृत्युु भएकोलाई पनि कोरोना लागेर मरेको भन्छ भनेर लान्छना लगाउने हो भने के यत्रो छ महिना जम्मा कोरोनाबाट मृत्यु भएको जाबो ४०१ जना मात्रै होला त प्रश्न गम्भीर छ।
के सरकारलाई यत्रो ६१ हजारलाई व्यर्थ औषधी उपचार गर्ने र व्यर्थै पाल्ने रहर त्यसै जाग्यो होला त? बिकसित राष्ट्रहरूले फोकटमा चामलको गेडा त दिंदैन |आज बिश्वभर त्यत्रो कोरोना संक्रमितलाई फोकटको औषधी उपचार र स्याहार गरिरहेको छ, किन होला त? बिश्वमा हेर्ने हो भने पश्चिमा देशमै बढि संक्रमित भेटिएको छ मृत्युु हुनेको संख्या पनि पश्चिमा नै बढि छ। त्यस्तै हेर्ने हो भने भारतमा यसले अति नै त्रास फैलाईरहेको अबस्था छ। भारतलाई त कोरोना र युद्वको त्रासले त्राही त्राही बनाएको अबस्था छ।
यता चीन भने कोरोनालाई रोक्न सफल भई अर्थतन्त्र तङ्ग्रि सकेको छ। हुन त यो लेख्दै गर्दा कोरोना बारे सोच्न बाध्य बनाउँछ, खोइ त हामीलाई केही भएको छैन भनेर तर कोरोना लागेर छट्पटाएर फर्केका व्यक्तिहरूको भनाई सुनियो भने अत्यास लागेर आउँछ। कसैले कोरोना हो भनी किन मृत्यु पछि मात्रै थाहा पाईन्छ भनेर बोलेको सुनिन्छ तर मृत्यु बरण गर्नेको स्वास्थ निरिक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होला होइन त, मृत्यु के कारणले भयो भनेर।
यसमा व्यक्तिगत धारणा केही छैन किनभने हामी कुनै बिज्ञ परेनौ तर यस कुराको ठोस कुरा बिज्ञबाट नै आउनु पर्छ भन्ने भनाई मात्रै हो। यदि पश्चिमाको खेल मात्रै मान्ने हो भने जानी जानी आफ्नो अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न तिर क‍ोही लाग्छ भने त्यसलाई महामुर्खको संज्ञा दिए हुन्छ। अहिले चीन, ब्रिटेन र रूस गरि ५ वटा औषधी कम्पनी तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा कोरोना बिरूद्व औषधी बनाउन सफल परिक्षणमा पुगिसकेको छ। रूसमा त यसको प्रयोगको रूपमा अमईसकेको छ।
जे होस् कोरोना केही भए पनि नभए पनि यसले त्रास वा संत्रास र कोहर नै उत्पन्न गरेको छ तर आफुले पिउने र खाने बानीलाई सुधार्ने अत्यन्तै आबश्यक छ। हामीले परापुर्वकालमा लिने जडिबुटी तथा औषधीले हामीलाई कुनै हानी पुर्याउँदैन भने नियमित व्यायम तथा योगले त झन् चुस्त तन्दुरूस्त न‌ै बनाउँछ। तर कोरोनाले अरूलाई के शिक्षा दियो थाहा भएन तर हाम्रो परिवारमा यसले धेरै राम्रो काम गर्ने मौका दियो। सर्बप्रथम त आत्मबिश्वास बढायो, स्वाबलम्बि पनि बनायो, बर्तमान फुर्सदिलो समयले सबै परिवार केही न केहिमा व्यस्त नै देखिन्छन्।
घरमा सरसफाइ अत्यन्तै राम्रो तरिकाले भयो, बगैंचा राम्रो बनाईयो, पुरानो टायर तथा लुगाबाट गमला बनाईयो, फलफुल तथा फुल रोपियो, घरमा अनेक घर पालुवा चराचुरुङ्गी जस्तै कालिज, लोकल कुखुरा, बट्टाई, कडकनाथ कुखुरा, टर्की, लौकाट पालियो। यसलाई बेचेर ठूलो आर्थिक फड्को मार्नुपर्छ भन्ने सपना बुन्न मद्वत गरायो। यो हाम्रो परिवारमा मात्रै नभई छिमेकिहरू प्राय: सबै कोही करेसाबारी, कोही फुलबारी, कोहि कुखुरा पालन, कोही आफै मर्मत संभार गरिरहेकै भेटिन्छन्। तसर्थ लाग्छ कोरोनाले कहर मात्रै होइन एउटा दरिलो शिक्षा लिएर आयो। हाम्रो बिनम्र आग्रह अरू बढ्ता जान्ने भन्दा बिज्ञ र भुक्तभोगीको नै कुरामा बिश्वास गरौं।
हामी जनता पनि बिवेकी छौं, यसक‍ो प्रयोग गरौं, चेतनशील प्राणी हौं चेतनाको बिर्को उघारौं।
(लेखक सिंह राष्ट्रिय सराेकार मन्च नेपालका अध्यक्षसाथै कर्मनिस्ठ अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)